Dastabej » अटवारीः मेरो चाहना छ अग्रासन ल्याउने मामालाई घरमै पालेको मुर्गा काटेर खुवाउँ
अटवारीः मेरो चाहना छ अग्रासन ल्याउने मामालाई घरमै पालेको मुर्गा काटेर खुवाउँ – Dastabej
अटवारीः मेरो चाहना छ अग्रासन ल्याउने मामालाई घरमै पालेको मुर्गा काटेर खुवाउँ
आज अग्रासनको दिन । छिमेककीको घरमा रौनकता छाएको छ । यता आफ्नो भने मन रोएको छ । कसैको घरमा आइपुगेका छन् दाजुभाइ छिटवा भरी अग्रासन लिएर । केटाकेटीहरु फुलौरी, अन्डीको रोटी खादै अनि हातमा लिएर कुदीरहेका छन् । कोही भने आधा बाटो पुगिसकेको आफ्नो अग्रासन बहुत ब्यग्रताका साथ कुरिरहेका छन् । मेरो विवशता, म कसको बाटो कुरेर बसु ? अग्रासनकै लागि भएपनि मेरी आमाले एउटा छोरो किन जन्माइदिनु भएन ? आमाले छोरो नजन्माइदिनुभएको पिडा आज अग्रासनको दिन बेस्सरी उम्लेर आयो । अग्रासनसंगै आउने खानाका परिकार फुलौरी, अन्डीको रोटी, खरिया, खुर्मा म आफै पनि पकाएर खान नसक्ने त होइन । र यि कुराहरु अटवारीको अग्रासनको रुपमा मात्रै खान पर्छ भन्ने पनि छैन । खान मन छ, पकाउनलाई सबै सामाग्री छ र जांगर पनि छ भने यि सब परिकार खानलाई अटवारी कुरीरहन पर्छ भन्ने पनि होइन । तर आफूले जतिसुकै मिठो वा जुन बेला पकाएर खाए पनि, त्यसलाई ‘अग्रासन’ भने भनिदैन । अट्वारीको अग्रासनमा मिसिएको ‘लैहर’ (माइतीघर) को माया ममता र त्यससंग मिसिएको लैहरको स्वादको म बयान गर्न सक्दिन । छिट्वा र ढकियाभरि खादिएर राखिएको अग्रासन, विवाहित छोरीको घरसम्म पुग्दा केही सद्ये र केही बसाएकै भएपनि विवाहित थारु चेलीलाई अग्रासनको आश त हुन्छ नै ।
मलाई पनि चाहना थियो अग्रासनमा आएको अन्डीको रोटी डिहुरार (डेउटा राख्ने कोठा) मा खटिया भरि फिजाउ । किनभने अन्डीको रोटी यति धेरै आएको हुन्छ अग्रासनको रुपमा कि १–२ दिनमा खानै सकिदैन । हप्ता दिन या त्यसभन्दा बढी पनि जान सक्छ । मलाई पनि चाहना थियो मेरा छोराछोरी हातमा खरिया र खुर्मा लिदै रमाउदै दौडिउन् आंगनभरि, जाउन छिमेकीको घरतिर र भनुन् मेरो मामाले ल्याइदिनु भएको । अनि चाहना छ मेरो अग्रासन ल्याइदिने मेरा छोराछोरीको मामालाई घरमै पालेको सबैभन्दा ठूलो मुर्गा (भाले) काटेर खुवाउ । चलन यस्तो छ कि अग्रासन दिन आउने दाजुभाइलाई भाले काटेर खुवाउन पर्छ ।मेरा यि चाहनाहरु पुरा हुनका लागि आमाले छोरानै जन्माइदिन पर्छ भन्ने पनि छैन । यि चाहनाहरु अन्य माध्यमबाट पनि पूरा हुन सक्थे । रगतको नाता नभए पनि मैले एकजना भाई पाएको थिए । अतिनै प्रिय भाइ, असाध्यै माया गर्ने भाइ । उसैले अग्रासन ल्याउछ भन्ने आशामा थिए म । तर उ आउन सकेन । म्यासेज पठायो– मलाई माफ गर्नुस दिदी । अग्रासन दिन आउन सकेन । मन त साह्रै थियो आउनलाई । छुट्टी मिलेन । बिदा मिलाइदिनका लागि हाकिमलाई निवेदन दिएको थिए, हाकिमले थर्काए । ‘यस्तो काम चापाचाप भएको बेला के को बिदा’ भन्दै । जागिरको आवश्यकता छ, छोड्न पनि त सक्दैन ।
अटवारीको दिन अनि अग्रासनको दिन सरकारले बिदा मिलाइ दिए कति जाती हुने है दिदी । मैले अग्रासन दिन आउन पाउथे अनि तपाइले अग्रासन खान पाउनुहुन्थ्यो । भाइको यस्तो म्यासेजले फेरी निराश भए म । भाइ नआउने अब पक्का भयो । त्यसपछि अर्का दादालाई मैले सम्झिन पुगे । वहासंग पनि मेरो रगतको साइनो त होइन । तर रगतको साइनो भन्दा कुनै पनि मानेमा कम छैन हाम्रो नाता । वहाले अग्रासन ल्याउनुहुन्छ कि भन्ने सोचे तर त्यो पनि सम्भव भएन । मेरो दादा समाजको अगुवा, आफ्नो समुदायको लागि खरो लेख्ने अनि बोल्ने मान्छे । अधिकारका कुरा चर्को गर्छ भनेर सरकारले झुठो मुद्या लगायो । अपराधीको दर्जा दियो । अनि जेलमा कोच्यो । अनि मेरो दादा कसरी आउनुहोला र अग्रासन दिन । सरकारले हामी माथि धेरै जालझेल गरेको छ, कति धेरै गरेको छ त्यति सारो त म यि कुराहरु बुझ्दिन तर मलाई साच्चै आज सोध्न मन भइरहेको छ– ए सरकार मेरो भाइलाई अटवारीको सरकारी बिदा नदिएर अनि मेरो दादालाई झुठा मुद्या लगाएर किन मलाई अग्रासनबाट वञ्चित गरिदैछ ?
थारुहरुको धेरै जसो चाडपर्वहरु गुर्ही, चिरै भज्हर, अष्टिम्की, ढुरहेरी, माघ संस्थागत हुदैछन् । केही हुने क्रममा छन् । मैले सुनेको भाइ टिकामा दिदीबहिनी नहुने दाइभाइहरुलाई बसन्तपुरमा सामुहिक रुपमा एकजना दिदीले भाइटिका लगाइदिन्छिन् अरे । अनि हामी जस्तो दाजुभाइ नहुनेका लागि सामुहिक रुपमा अग्रासन खाने÷ खुवाउने चलन किन संस्थागत हुन सकिरहेको छैन । चाहे त यसो पनि गर्न नसकिने होइन । लैहरकै अग्रासन नपाएपनि आफ्नो समुदायको संस्थागत÷सामुहिक अग्रासनले पनि चित्त बुझाउने ठाउ रहन्थ्यो । तर यो पनि हुन सकेको छैन ।यस्तै कुराहरु दिनभर सोची रहे । म कहा अग्रासन आउदैन, यो कुरा पक्का छ । र पनि झिसमिसे अध्यारो हुन्जेलसम्म अग्रासन आउने बाटो कुर्नुको मजा लिइरहे । ईन्दु लेखिका तथा अनुसन्धानकर्ता हुन । हाल उनी कोरीयाको राजधानी सोलमा अध्ययनरतछिन ।
२७ भाद्र २०७८, आईतवार ०९:०७ प्रकाशित